NextMapping | Fiofanana mpitarika
Fiofanana mpitarika amin'ny NextMapping ™
Ny ho avin'ny asa dia mitaky fehezanteny vaovao ho an'ny mpitondra sy ny ekipa.
Mampiasa vola an'arivony tapitrisa ny orinasa toa an'i Amazon amin'ny fampitaovana sy mamerina ny mpiasa. Miankina amin'ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny tanjona dia ny fifantohana amin'ny fianarana mandritra ny androm-piainana.
Mba hahatonga ny mpitondra fiovana lehibe sy matanjaka ary ny mpikambana ao amin'ny ekipa dia tsy maintsy manova ny toetran'ny tena manokana. Ny fomba tsara indrindra amin'ny fanovana fitondran-tena dia ny famerimberenan'ny fianarana miaraka amin'ny fampiharana amin'ny fotoana tena izy ny zavatra nianarana.
Ny fampiofanana mpitarika NextMapping ™ dia azo alaina amin'ny alàlan'ny Zoom, fampianarana amin'ny Internet izay mifantoka amin'ny ho avy amin'ny asa ary koa ny fiofanana efa azo zahana amin'ny alàlan'ny Webinar na misy soratra misy marika fotsy ho an'ny intranetsinao.
Inona no mety ho endrik'i 2030 ...
… Raha nanatsara ny fampiasam-bolanao tamin'ny fampivoarana ny fahaiza-manao ho an'ny ekipanao?
Ianao ve sy ny mpitarika anao mitarika ho amin'ny hoavy ao an-tsaina?
Raha ny zava-misy haingana eo amin'ny sehatry ny toeram-piasana ankehitriny no tombony lehibe amin'ny fifaninanana dia ny orinasa miaraka amin'ireo mpitarika sy ekipa nivelatra indrindra.
Inona ny drafitrao hiantoka ny fananan'ny olanao ny fampivoarana farany sy fahaiza-manao farany indrindra ahafahana manatanteraka ny fanovana sy ny fangatahana ataonao eo amin'ny orinasa?
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny Millenial sy ny Gen Z's dia hijanona maharitra kokoa ho an'ireo orinasa manome fotoana fianarana sy fivelarana mitohy amin'ny alàlan'ny fampiofanana.
Ny fikarohana ihany koa dia mampiseho fa ny asa sy ny andraikitra nentim-paharazana dia ho zavatra taloha ary ny toeram-piasana ho avy dia hanana fitambaran'ny mpiasa manontolo andro, tapany ary ny mpiasa tsy miankina.
Ny fahaizana ilaina ...
Ny fahaiza-manao ilaina hametrahana ity ho avy haingana ity dia misy:
Ny fahaizana mitantana fampahalalana be dia be sy mamantatra ny fomba fiasa tsara indrindra
Ny fahaizana mitarika fanovana miaraka amin'ny herim-po, fitarihana, faharesen-dahatra ary fahitana
Ny fahafantarana ny toe-javatra maro ary afaka mifandray amin'ny mpandray anjara isan-karazany
Ny fahafahana hiara-hiasa sy manavao amin'ny olona marobe miaraka amin'ny olona samihafa
Ny fahaizana mampiasa teknolojia miaraka amin'ny fifantohana voalohany amin'ny 'olona aloha'
Ny fahaizana mampiasa ny ho avy ilaina amin'ny fahaiza-miasa amin'ny 'fahaizana mifanerasera amin'ny olombelona'
Ny 76% amin'ny CEO dia mitanisa ny fivoaran'ny fahaiza-manao ho an'ny mpitarika sy ny ekipa ho toy ny sehatra lehibe ifantohana rehefa hanatratra ny 2030 isika.
Ny 70% amin'ireo fikambanana dia manondro ny elanelana fahaiza-manao ho iray amin'ireo fanamby dimy lehibe indrindra ananany.
Ny 49% amin'ny mpiasa ihany no nilaza fa ny orinasan'izy ireo dia manome ny fampiofanana fahaiza-manao sy ny fitomboana.
Fomba iray vaovao amin'ny fampivoarana fahaiza-manao
Ny fomba fiasa nentin-drazana taloha dia tsy hanomana mpitarika sy ekipa ho an'ny ho avy.
Ilaina ny fomba vaovao hampiroboroboana ny fahaiza-manao - ny fomba vaovao dia misy fandaharam-pianarana mifandraika amin'ny toe-javatra tena izy eo amin'ny asa. Ao amin'ny NextMapping TM ireo mpanolotsainay dia voamarina amin'ny paikady fanofanana izay mifanaraka amin'ny fizotran'ny NextMapping ™.
Mba hahafahana mampiofana 'mifikitra' ny fizotran'ny fanananay dia miantoka ny tahan'ny fihazonana 90% ++, ny tahan'ny fampiharana 70% amin'ny fiofanana momba ny asa ary ny fanatsarana maharitra ny asa.
Vokatry ny fahavitan'ny programa fampiofanana dia misy:
Mihamitombo ny fitomboan'ny fandraharahana satria mitombo ny tahan'ireo mpitarika sy ny ekipa
Mitombo ny fanavaozana sy ny fifanolanana eo amin'ny mpitondra sy ny ekipa
Mitombo ny vahaolana ho an'ny mpanjifa mamorona noho ny mpikambana mahay kokoa sy natanjaka ny mpikambana
Mitombo ny antony manosika sy fandraisana anjaran'ny mpiasa rehetra
Mitombo ny fahafaha-mikaroka sy mitazona talenta mahafatifaty
Mitombo ny fitarihan'ny mpitarika sy ny ekipa amin'ny famoronana vina sy iraka mifantoka amin'ny ho avy
Manolotra programa fampiofanana sy ekipa izahay amin'ny alàlan'ny fomba fanaterana isan-karazany ao anatiny, virtoaly amin'ny alàlan'ny Zoom na WebEX, fiofanana amin'ny haino aman-jery an-tserasera sy famokarana.
Ireo nahazo diplaoma rehetra amin'ny fandaharan'asa dia mahazo fanamarinana fahatongavan'ny NextMapping ™.